Taylor နဲ့ Bieber တို့ရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် နာမည်ကြီးလာရတဲ့ တက်သစ်စလေးတွေ
On February 20, 2018 February 28, 2018 By Baking Brains
လတ်တလော သီချင်းလောကမှာတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးသား အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အားပေးအားမြောက်ပြုမှုကြောင့် တက်သစ်စ (သို့) နာမည်သိပ်မကြီးတဲ့ Artist တွေဟာ လူသိများအောင်မြင်လာပါတယ်။
ဝါသနာအရ Home Studio လေးတွေမှာ သီချင်းတွေဖန်တီးပြီး Spotify တို့ iTunes တို့လိုမျိုး လူသုံးများတဲ့ Music Platform တွေပေါ်မှာတင်ထားကြပါတယ်။ အသိအမှတ်ပြုသူတစ်ချို့ရှိသလို အက်မင်တို့လို ကိုယ်မရင်းနှီးတဲ့နာမည်တွေ့တာနဲ့ ကျော်သွားကြသူတွေလည်းရှိတာကြောင့် ကိုယ့်သီချင်းဟာ Heavy ကြီးဖြစ်နေရင်တောင် အောင်မြင်သင့်သလောက်မအောင်မြင်ပါဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ Cele တွေရဲ့နားထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ရွှေအိုးကြီးကောက်ရသလို အပျော်ကြီးပျော်သွားရမှာ ကျိန်းသေပါ။
ဒီတစ်ခါမှာလည်း တက်သစ်စ Artist လေး Bazzi တစ်ယောက် သူ့ရဲ့မကြာခင်က ထွက်ရှိထားတဲ့ Mine သီချင်းကို ကိုယ်တွေရဲ့ အချစ်တော် တေတေ (Taylor Swift) ရဲ့ Spotify Favourite List ထဲမှာတွေ့တာကြောင့် အပျော်ကြီးပျော်နေလေရဲ့။ (တေတေရဲ့ spotify list အကြောင်းလေးကို ဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။) နောက်ထပ် Bazzi ရဲ့ Why သီချင်းကိုလည်း နာမည်ကြီး Star တွေ Youtuber တွေရဲ့ IG Story တွေထဲမှာ တော်တော်များများ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Stranger Things Star တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Millie Bobbie Brown ဟာဆိုရင်လည်း Why ထွက်ရှိပြီး ၂၄ နာရီမပြည့်ခင်မှာပဲ သူမရဲ့ IG Story မှာ “Suchagreat Artist” ဆိုပြီး ချီးမွမ်းထောပနာပြုထားတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
one of the realist songs i’ve ever written… coming this friday ?⭐
A post shared by bazzi (@bazzi) on Jan 21, 2018 at 3:09pm PST
Bazzi ဟာဆိုရင် အသက် ၂၀ သာရှိသေးတဲ့ လူငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုဟာ အစကောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ သူ့ရဲ့သီချင်းလေးတွေဟာ လူငယ်တွေကြားမှာ နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲ ဖန်တီးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သံစဉ်တွေကြားမှာ သီချင်းစာသားတွေရှုပ်ယှက်ခက်မနေပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လူငယ်တွေကို ဟက်ထိစေမှာ ကျိန်းသေပါပဲ။ ဒီတော့ Bazzi ထွက်ရှိထားတဲ့ အမိုက်စား သီချင်းလေးသုံးပုဒ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Bazzi လိုမျိုး နောက်ထပ် လူသိများလာတဲ့ Artist တစ်ယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်။ သူ့နေရာမှာကိုယ်သာဆိုရင် ပျော်လို့တောင် သေသွားနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့သူတွေကတော့ အက်မင်ရဲ့ အချစ်တော် Justin Bieber နဲ့ Jaden Smith တို့ပါပဲ။
အသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Harry Hudson ဟာ Hodgkin Lymphoma လို့ခေါ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးကို ခံစားနေခဲ့ရသူပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ရေးစပ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကို နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အလိုလိုမျက်ရည်ဝဲလာမှာကျိန်းသေပါပဲ။ January9ရက်နေ့မှ ထွက်ရှိထားတဲ့ “Yellow Lights” ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲက “So what should I do in the darkness of you, When you light up my moon from July until June” ဆိုတဲ့ စာသားလေးဟာဆိုရင် အက်မင့်ရင်ကို တော်တော်လေးထိစေတဲ့ စာသားလေးပါပဲ။ Justin တစ်ယောက်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ ဘာတွေတိုက်ဆိုင်သွားသလဲမသိ သူ့ရဲ့ IG Story မှာ “Yellow Lights” ဟာဆိုရင်တော်တော်လေး လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ “Yellow Lights” ရဲ့ Music Video အောက်မှာဆိုရင်လည်း ဒါမျိုး Comment လေးတွေတော်တော်များများကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
“Who’s here from Justin Bieber’s Insta story? ? ”
“Justin Bieber’s instagram story brought me here ”
“I just saw Justin’s stories that redirected me here.. loving it, sounds really good! ??”
ကဲ… ဒီလိုဆိုရင်တော့ Harry ကို လူသိအောင် Justin လုပ်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ အားလုံးရဲ့ရင်ကိုထိစေမယ့် Harry Hudson ရဲ့ Yellow Lights ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (တစ်ရှူးလေးတော့ ယူထား)
PREVIOUS POST Previous post: One D အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Liam Payne နဲ့ Cheryl Cole တို့ လမ်းခွဲကြတော့မှာလား
NEXT POST Next post: ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်မှာ ပွဲကြည့်သူတွေကို နားဒုက္ခပေးသွားခဲ့တဲ့ ‘Despacito’